Ekpere ịrịọ maka ọrụ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Ekpere iji rịọ maka ọrụ
Maka anyị niile, n'oge ụfọdụ na ndụ anyị, oge nsogbu ego na-abịa. Fọdụ na-arụ ọrụ ha, n'agbanyeghị na ihe ha na-erite ezughi oke; ndị ọzọ na-arụ ọrụ ha ma na-enwe nrụgide na obi nkoropụ n'ihi ụgwọ ndị dị mkpa. Ọ bụrụ na ị gabiga ọnọdụ ọjọọ ma chọọ ọrụ, tụkwasị Chineke obi onyenwe anyị ma mee a ekpere ịrịọ maka ọrụ dị ka anyị na-egosi gị ebe a.
1 Ekpere iji rịọ maka ọrụ, tụkwasị Chineke obi
2 Mkpa ọ dị ikpe ekpere
3 Olee otu esi ekpe ekpere?
Ekpere iji rịọ maka ọrụ, tụkwasị Chineke obi
Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu na ndụ gị, ọ dịghị ihe dị mma karịa ịtụkwasị Chineke obi, Onye okike anyị. E kwuwerị, ọ dịghị mgbe ọ na-ahapụ ụmụ ya. Ọ bụrụ n ’ị gaghị ahụta ọrụ ahụ igbo mkpa ndị ị hụrụ n’anya chọrọ ma ọ bụ ihe dị gị mkpa, jiri okwukwe kpee ekpere. N'ebe a, anyị hapụrụ gị ahịrịokwu na-esonụ:
"Ezigbo Nna nke Eluigwe, n'aha Jizọs, a na m achọ amamihe gị ma tụkwasị gị obi ka ị duru m chọta ọrụ kachasị m mma. Site ugbu a aga m achọ ije ije n'okpuru ebere gị na eziokwu gị, na -akpọrọghị m isi na uche m elu.
Nyere m aka inweta ezigbo ọrụ nke, site na aka m, onweghi ihe na-akọ ụkọ ma ọ bụ nke m. Agaghị m echegbu onwe m ma ọ bụ na-echegbu onwe m maka ihe ọ bụla, Nna, n'ihi na a na m enwe mmetụta nke udo gị karịrị obi m na uche m.
Are bụ isi iyi m nke mmiri na-enye ndụ, a tụkwasịrị m obi na nduzi gị na ị ga-enye m ike iguzogide nsogbu na nsogbu ndụ m kwa ụbọchị. Nna, ekelee m gị maka inye m mkpa maka ọrụ dịka akụ gị na ebube nke Dinwenụ anyị.
Oh Chukwu m, ka ike gị soro m taa ịchọ ọrụ. Duru m gaa n’ọrụ ahụ nke m ga-eji mkpụrụ obi m niile hụ n’anya ma hụ n’anya. Duru m gaa ebe nwere nkwanye ugwu na imekọ ihe ọnụ, na gburugburu ebe nchekwa ma nwee obi ụtọ. Nyere m aka ịchọpụta ụdị ọgụgụ isi mmụọ na nke ime mmụọ n'ọlụ ọhụrụ ahụ ị kwadebeere m.
Daalụ, Onyenwe anyị, maka ige m ntị na inyere m aka taa. Ndụ anaghị adị mfe mgbe niile, mana m ga-agba mbọ icheta na ị nọ mgbe niile inyere m aka n'oge ọ bụla nke ndụ m. Onye agọziri agọzi ka I bu, Onye-nwe-ayi, Onye agọziri agọzi ka Aha Nsọ Gi bu.
Mkpa ọ dị ikpe ekpere
Ihe isi ike na ndụ anyị mgbe ụfọdụ na-eme ka anyị nwee mmeri. Maka nke a, oge ụfọdụ anyị na-eche na Chineke anaghị enyere anyị aka, na ihe anyị gabigara bụ ihe adịghị mma. Anyị kwenyere na, ka anyị na-ezere oke ike o nwere ike imerụ ndị gbara anyị gburugburu, anyị dị mma na anyị ekwesighi ka ihe na-eme anyị. Nke a nwere ike ịbụ eziokwu, mana Chineke anaghị ahapụ anyị n'ezie.
Chineke anaghị echefu ụmụ ya, ndị o kere n’onyinyo ya nakwa n’onyinyo ya. Agbanyeghị, agbara ya azụ: ihe okike ya na-echefu ya, ọbụnakwa na-ekpe ya ikpe. Mgbe ọ bụla ihe siiri anyị ike, anyị kwesịrị icheta na Chineke ga-anọnyere anyị mgbe niile. Ọ bụ ezie na ụfọdụ na-ekwusi ike, ọ bụghị ya na-etinye anyị n'ọnọdụ ndị na-adịghị mma, kama ọ bụ uche ya izere ya.
N'ihi ihe a dị n'elu, ọ dị mkpa ịghara ikewapụ anyị na Chineke. Ihe isi ike nwere ike imetụta ofufe anyị, okwukwe anyị, mana anyị agaghị ekwe ka nke ahụ ruo ogo dị elu. Tonọgide na-agwa Chineke okwu bụ ime ka mmụọ anyị dị ọcha, ọ bụ ịdabere ná ngọzi ya na nchebe ya.
N'ebe a, ekpere na-adị mkpa, n'ihi na ọ bụ ihe nwa ya nwoke, bụ Jizọs, nyere iwu ka o mee. Prayingghara ikpe ekpere bụ otu ihe dịka ịgwa Chineke na anyị achọghị ya. Anyị nwere ike ịba ọgaranya na-enweghị Chineke, anyị nwere ike, anyị ga-eme nke ọma, ihe ọbụla na-enweghị ya. Ma ka anyị ghara ichefu na anyị enweghị ngọzi ya, ma ọ bụ nchebe ya, anyị ga-abụ ndị na-achọ ọdịmma onwe anyị.
Ọ bụrụ na ị nwere azụmahịa ma ịchọrọ ikpe ekpere maka uto ya na ọdịnihu akụ na ụba ya, ị nwere ike ịmasị n'ịgụ ya ekpere Saint Matthew.
Olee otu esi ekpe ekpere?
Jizọs, ndị ozi, ndị ọbụ abụ, ndị amụma, ha niile nyere anyị iwu ikpe ekpere. Ekpere dị ka ọbara nke mmụọ anyị. Anyị na-eche ihe kpatara ya ụwa Agbanwewo nke ukwuu, na-ezighi ezi, gịnị kpatara oke nchegbu, nchegbu dị ukwuu, nrụgide na n'ihi nke a, ọrịa. Ọtụtụ bụ ndị Katọlik, Ndị Kraịst na ndị ọzọ, mana ọtụtụ bụ ndị gbakụtara Chineke isi n’onwe ha. Onye na-ekpe ekpere anaghị emehie; ma onye ọbụla nke na-emehie anaghị ekpe ekpere. Ngwọta nke nchekasị na nrụgide bụ ịtụkwasị Chineke obi, kpee ekpere ka gị na ya wee nwee nkwukọrịta.
Ikpe ekpere, ọ bụghị naanị inweta ọrụ kama maka ihe ọ bụla, ihe mbụ bụ okwukwe. Nwee okwukwe na ebumnuche dị mma. Anyị anaghị arịọ ka anyị nwee akụnụba ma ọ bụ nweta ihe na-agụ anyị agụụ, n’ikwu ya n’otu n’otu. Anyị na-arịọ ka anyị nweta ihe dị anyị mkpa, ka anyị nwee ike ịkwụ ụgwọ ndị ahụ, ka anyị nwee ike igboro ndị ikwu anyị mkpa anyị, ka anyị bie ezigbo ndụ. Karịsịa, ka ọ bụrụ iji mezuo uche Chineke, na ebumnuche o nyeworo anyị.
Ka ekpere wee dị irè, ọ dị mkpa ọ bụghị naanị iji obi anyị niile na-ekpe ya kamakwa ọ ga-esi ọnwụ. Dị ka Jizọs kwuru n'ilu banyere enyi na-enweghị mmasị:
"Ka e were ya na otu onye n'ime unu nwere enyi wee chigharịkwuru ya n'etiti abalị wee sị:" Enyi, gbazinye m ogbe achịcha atọ, n'ihi na otu n'ime ndị enyi m bịara njem na enweghị m ihe m ga -enye ya ", na site n'ime ọ na -aza:" Echegbula m; ugbu a emechiela ụzọ, mụ na ụmụ m dina n'ihe ndina. Enweghị m ike ibili nye gị ha. Ana m emesi gị obi ike na ọbụlagodi na ọ gaghị ebili inye gị ha n'ihi na ọ bụ enyi gị, na ọ ga -ebili ma ọ dịkarịa ala n'ihi nkwụsi ike gị wee nye gị ihe niile ịchọrọ. M na -emekwa ka obi sie gị ike: rịọ, a ga -enye gị, chọọ, ị ga -ahụkwa, kụọ aka, a ga -emeghere gị. N'ihi na onye na -arịọ na -anata; Ị chọọ, ị ga -ahụ ya; a ga -emeghere onye na -akpọ oku ». (Luk 11, 5, 10)
N'otu ụzọ ahụ Jizọs sịrị na anyị na-arịọ ka a nata anyị, anyị ga-enwerịrị okwukwe ma na-esi ọnwụ ka Chineke nyere anyị aka. Nke a na-echefughị ​​na, na mgbakwunye, anyị ga-enwerịrị akparamagwa kachasị mma ma na-ekwusi ike na ọchụchọ maka ihe anyị chọrọ.
Rosary na Nwa agbogho nke Guadalupe
Rosary Holy Friday
Rosary di ebube Wednesday
Ekpere iji bulie nkpuru obi onye nwuru anwu
Ihe omimi nke Sunday